မေတ္တာရပ်ခံချက်- | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ဦးဝီရသူ့ရဲ့ အပြောကောင်းမှုနဲ့ မှားယွင်းတဲ့ အတွေးအခေါ်ကုို ပေါင်းစပ် လုိုက်တဲ့ အခါ တုိုင်းပြည်ကုို အန္တရာယ် ဖြစ်စေပါတယ်
According to Lord Buddha’s teaching there must be NO MORE ငါ or me or mine or Atta…the 969 and Wirathu are against Buddhism »
စိတ်လိုက်မန်ပါ ဒေါသအလျှောက် အစ္စလာမ် မဟုတ်သည့် အခြားသော ဘာသာတရား တို့အား ပြစ်တင် ရှုံ့ချလျှက် ရေးသား ပြောဆိုခြင်း၊ မသင့်လျှော်တဲ့ စကားလုံးများဖြင့် တိုင်းထွာပြောဆိုခြင်းများ မပြုလုပ်ကြရန် ကျွန်တော့အား ချစ်ခင်လေးစား သည့် မြန်မာမွတ်ဆလင် အွမ္မတ်သူ အွမ္မတ်သား ညီအစ်ကို မောင်နှမတို့အား အထူး မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ အတိတ်မှာ ဖြစ်ခဲ့မှု ရေးသား ပြောဆိုခဲ့မှုများ ရှိခဲ့လျှင်လည်း ဒီနေ့ကစ ပြုပြင်ပါလို့ ထပ်ဆင့် မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ မတရားမှုကျူးလွန်သူကို အရေးယူဘို့သာ ဆောင်ရွက်တာပါ။ လက်စားချေဘို့ ကြိုးစားနေခြင်း မဟုတ်ပါ။ အရေးယူမှုနဲ့ လက်စားချေမှုရဲ့ အနက် သဘောက ကွာခြားလွန်းလှပါတယ်။
မြန်မာပြည်အတွက် လူ့အခွင့်အရေး၊ တန်းတူညီမျှ အခွင့်အရေး လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်သူများတွင်လည်း ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၊ ဦးဇင်းများ ပါဝင်ပါတယ်။ လူတွေဟာ အပြန်အလှန် ရိုသေလေးစားမှုရှိရပါမယ်။
ကျွန်တော့ ညီအစ်ကို မောင်နှမများ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ခြင်းဖြင့် ကျွန်တော် တို့ကို ထောက်ခံ စေလိုပါတယ်။ မြန်မာတစ်ပြည်လုံးအတွက် ကျွန်တော်တို့ ပေးထားတဲ့ ကတိတွေကို ကျွန်တော်တို့ဘက်က တာဝန်ကျေအောင် ထမ်းဆောင်ပေးပါမယ်။
This entry was posted on September 10, 2013 at 10:13 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.